“Isco waa ciyaaryahanka ugu fiican Spain ee adduunka” _ Luis Enrique oo si weyn u difaacay xidiga kooxda Real Madrid – Gool FM
“Isco waa ciyaaryahanka ugu fiican Spain ee adduunka” _ Luis Enrique oo si weyn u difaacay xidiga kooxda Real Madrid
Dajiye December 21, 2018
(Spain) 21 Dis 2018. Macalinka xulka qaranka Spain Luis Enrique ayaa si weyn u difaacay xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid Isco, kaasoo xiliyadii lasoo dhaafay si weyn ugu dhibtooday kursiga keydka, maadaama uusan door weyn ku yeelan qorshaha tababaraha cusub kooxda Real Madrid ee Santiago Solari.
Francisco Isco ayaan si toos ah ugu soo bilaabanin 12-kii kulan uu Santiago Solari hogaamiyay kooxda Real Madrid, marka laga reebo 1 kulan oo kaliya, taasoo shaki weyn sii galisay mustaqbalkiisa garoonka Santiago Bernabéu.
Hadaba macalinka xulk qaranka Spain Luis Enrique ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in Francisco Isco uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican Spain xilligaan la joogo.
Enrique ayaa dhinaca kale tilmaamay inaysan jirin wado looga shakiyo tayada iyo awooda ciyaareed ee Francisco Isco, taasoo ka dhigeysa inuusan ka saari doonin qorshahiisa xulka La Roja, xitaa hadii uusan boos joogta ah ku heysanin kooxda Real Madrid.
“Waxaan la dhacsanahay qaab ciyaareedka Francisco Isco, wuxuu bixiyay qaab ciyaareed cajiib ah koobka aduunka 2018, qofna kuma doodi karo tayadiisa, waa ciyaaryahanka ugu fiican Spain ee adduunka”.
“Marka laga soo tago hadalkeyga, waxaad arki kartaa fal celinteyda, sababtoo ah waxaan ugu yeeray 6 kulan”.
Waxaa xusid mudan in Francisco Isco lala xiriirinayo ka tagista kooxda Real Madrid xili ciyaareedka soo socda, si uu ugu dhaqaaqo kooxaha reer England sida Manchester City iyo Chelsea.
Kahor kulanka Juentus Vs Roma __ Giallorossi oo ka mid ah kooxaha dhibanayaasha u ah Ronaldo
Cristiano Ronaldo waa inuu 4-gool ku dhaliyo inta Sanadka ka harsan haddii kale............